पर्यटक अड्याउने रणनीति अझै बनेन – mYKantipur
रेखा भुसाल/किरणमान बज्राचार्य
लुम्बिनी – जापानी नागरिक प्रा. केन्जो टांगेले ४१ वर्षअघि गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित विकास थाल्दा लुम्बिनीका सात गाउँ विस्थापित भएका थिए। मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेका ती गाउँका बासिन्दाले लुम्बिनीको विकासलाई त्यति बेलै आत्मसात् गर्दै आफनो घरबास दिएका हुन
लगत्तै नेपाल सरकारले लुम्बिनी विकास समिति गठन ग-यो। थान्तकै सक्रियतामा १९७२ मा जापानका वास्तुविद प्रा. केन्जो टांगेलाई लुम्बिनीको व्यवस्थित विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने जिम्मा लगाइयो। टांगेको गुरुयोजना सन् १९७८ मा पारित भई कार्यान्वयनमा आएको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तेय (अवधेशकुमार त्रिपाठी) ले बताए।
गुरुयोजना समयमै पूरा नहुँदा लुम्बिनीको विकास र पर्यटन विस्तारमा सोचेअनुरुप प्रगति हुन सकेको छैन।
तीन वर्गमाइल अर्थात् एक हजार एक सय ५० बिघा क्षेत्रमा विस्तारित लुम्बिनी गुरुयोजनामा एकएक वर्गमाइलका तीनवटा क्षेत्र छन्– पवित्र उद्यान, विहार क्षेत्र र लुम्बिनी ग्राम। दक्षिणतर्फको पवित्र उद्यानमा बगैंचा, सुन्दर पोखरी, पुराताŒिवक तथा ऐतिहासिक धरोहर छन्। उद्यानदेखि उत्तरतर्फ विहार क्षेत्र छ। यहाँ थेरवाद बौद्धमार्गीका १३ र महायानीका लागि २९ वटा घडेरी छुट्याइएको छ। तीमध्ये अधिकांश विहार बनेका छन् भने केही निर्माणकै क्रममा छन्। लुम्बिनी ग्राममा अनुसन्धान केन्द्र, पुस्तकालय, सभागृह, संग्रहालय छन्। ग्राममै बनाउने भनिएको हाइस्कुल, क्लिनिक, प्रशासनिक ब्लक, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, कनेक्टिभिटी रोड, नाला, ल्यान्ड स्केपिङलगायतका पूर्वाधार बन्न बाँकी छन्। पवित्र उद्यान सुन्दर बनाउने भनिएका पोखरीको व्यवस्थापन गरिएको छैन।
तिलौराकोट पुग्ने सडक जीर्ण हुँदा हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे हुन्छ। गोटीहवा र सगरहवासम्म ठूला बस जाँदैनन्। कतिपय पुरातात्विक क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन। निग्रोधाराम (कुदान), निग्लिहबा र गोटिहबा चौपाया चरन बनेको स्थानीय तेजकुमार बौद्धाचार्यले बताए। लुम्बिनी र कपिलवस्तु परिपूरक भए पनि सरकार र लुम्बिनी विकास कोषले कपिलवस्तुका महत्वपूर्ण बुद्धस्थललाई उपेक्षा गरेको बौद्धाचार्यले बताए।
प्युठानको स्वर्गद्वारी, बाँके र बार्दियाको रष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षसँगै रोल्पा रुकुमलाई जोडेर पर्या–पर्यटन योजना बनाउन सके प्रदेश र केन्द्र सरकारले लिएको पर्यटनबाट समृद्धिको छलाङ भन्ने नारा सार्थक हुने पर्यटनविज्ञ सेढाईंले बताए। निजी क्षेत्रले प्रदेशका महŒवपूर्ण भूगोल र सम्पदालाइ समेटेर टुर प्याकेज, जिप सफारी तथा ट्रेकिङ प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो पनि उनले औंल्याए।
२५६३औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
शनिबार २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदैछ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई गौतमबुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाणको सम्झनास्वरुप मनाउने गरिन्छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गरिने बुद्ध जयन्ती समारोहको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
बुद्ध जयन्तीकै अवसरमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश नं. ५ सरकारले यो वर्षलाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यअनुरुप तयारी गरेको छ।